Video ka iTunes Ntụgharị: Olee mbubata Videos Gị iTunes Library
Olee otú mbubata Videos ka iTunes Library
Chọrọ mbubata nkiri, music ma ọ bụ n'ụlọ video ka iTunes na mgbe ahụ mmekọrịta na na na iPhone na iPad ma ọ bụ dezie iTunes nkiri na iMovie ma ọ bụ Final Cut Pro? Ebe ọ bụ na iTunes bụ nnọọ picky banyere ihe Ụdị ọ na-akwado, biko akpa ego ndị iTunes akwado faịlụ formats.
iTunes Ò Kwekọrọ n'Ozizi File Formats
iTunes akwado Video & Audio File Video: MOV, MP4, M4V, H.264 ma ọ bụ MPEG-4 itinye na koodu
iTunes Non-akwado Video File AVI, FLV, mpg, MPEG, WMV, 3GP, VOB, MTS, MKV, 3G2, 3GPP, TS, TP, TRP, M2TS, DV, MOD, ASF, DAT, F4V, RM, RMVB, DivX, OGV, VRO, MXF.
Part 1: Olee-mbubata Video (iTunes akwado) na iTunes
Part 2: Olee-mbubata Video (iTunes unsupported) na iTunes
Nkebi nke 3: Video ka iTunes FAQ
I nwere ike dị ịdọrọ na dobe a faịlụ ma ọ bụ nchekwa iTunes. Ọ bụrụ na ị ịdọrọ a nchekwa, niile faịlụ na nchekwa ga-dị ka iTunes. Ọzọkwa ị nwere ike pịa File> Tinye ka Library, na-agagharị na-chọta gị faịlụ ma ọ bụ nchekwa, wee pịa "Open".
Ọ bụrụ na gị video faịlụ na-anaghị akwado na iTunes, i kwesịrị iji tọghata video ma ọ bụ ọdịyo faịlụ ka MOV, MP4 ma ọ bụ M4V formats. Isiokwu a ga-agwa gị ihe zuru ezu video toolbox iji tọghata video ọ bụla na formats ka iTunes, download online videos ka iTunes, na ọbụna dezie gị iTunes fim.
Tọghata ọ bụla video ka iTunes akwado formats (MOV, MP4, M4V, H.264 na MPEG-4).
Tọghata ọ bụla music ka iTunes akwado formats (MP3, M4A, AAC).
Tọghata vidiyo na ZERO àgwà ọnwụ, na-echebekwa ndị origianl video àgwà kpamkpam.
Ọkụ iTunes video ka DVD ka mma òkè na ndị enyi gị.
Lee, m ga-agwa gị otú iji tọghata video ka iTunes na Video Converter Ultimate (n'ihi na Mac dị ka ihe atụ)
Nzọụkwụ 1: Dọrọ na dobe gị video a iTunes video Ntụgharị
Nzọụkwụ 2: Pịa "Video" Atiya na ouput ebi ndụ ma họrọ MP4, MOV, M4V na ndị ọzọ dị ka mmepụta usoro.
Nzọụkwụ 3: Pịa "tọghata" bọtịnụ convet videos ka iTunes.
1. I nwekwara ike iji nke a iTunes video Ntụgharị ka ibudata online video ka iTunes.
Dị nnọọ pịa "Download" taabụ na n'elu nke software interface, na mgbe ahụ mado weebụ gị njikọ site na ịpị "Tinye URL" button na elu ekpe nke interface .
Ebe ọ bụ na ebudatara online video nwere ike ịbụ adịghị na iTunes dakọtara format, dị nnọọ mbubata ebudatara video ka a ngwa, na mgbe ahụ na-eso nzọụkwụ n'elu iji tọghata ọ ga-akwado site na iTunes.
2. Nke a ngwa nwekwara ike na-arụ ọrụ dị ka a ọkachamara iTunes video nchịkọta akụkọ. Wondershare Video Ntụgharị bụkwa a mma-ọgaranya converting ngwa na embeds a set nke isi video edezi ngwaọrụ. Dị ka a iTunes video nchịkọta akụkọ, ọ na-enyere gị aka ewepụtụ si na-achọghị akụkụ, akuku si nwa Ogwe, mgbanwe akụkụ ruru si 4: 3 16: 9 na Anglịkan, bugharia 90 degrees klookwaisi, mgbochi klookwaisi, tinye nkwụnye na ndepụta okwu, itinye pụrụ iche mmetụta, na ndị ọzọ. Gbalịa ya maka free ugbu a.
Ọ nwere nkecha interface, na niile na ọrụ dị nnọọ kemfe na mfe iji. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka jikota ọtụtụ mkpachị n'ime a dum otu, dị nne Mmetụta kwụsịrị "jikota niile videos n'ime otu faịlụ" igbe na ala. Mgbe ị na mezue iTunes video edezi, họrọ gị chọrọ format na mmepụta format window, na iti tọghata iji nweta gị chọrọ mmepụta video.
1. ike ịgbakwunye iTunes dakọtara video faịlụ dị ka MP4, MOV, ma ọ bụ M4V ka iTunes.
I. Jide n'aka na i QuickTime arụnyere na kọmputa gị.
II. Gị video codec kwesịrị iTunes dakọtara (H.264 ma ọ bụ MPEG-4). Nnọọ iji Video Converter Ultimate ka gị video codec site na ịpị "Ntọala" button na ala nri nke interface.
II. Nso QuickTime ọkpụkpọ ma ọ bụ Malitegharịa ekwentị iTunes inwe a-agbalị.
2. m dị video ka iTunes enweghị njehie, ma dị video-apụghị ịchọta na iTunes (iTunes 11).
Ị pụrụ ịchọ gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ịchọta gị nkiri. Ọzọkwa gị video nwere ike ịbụ na "Home Videos" nchekwa, dị nnọọ pịa bọtịnụ n'elu menu-elele ya.
3. Ike Detuo ma ọ bụ na-egwu iTunes zụrụ nkiri na ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka onye na Android ekwentị.
iTunes fim na-DRM echebe. Ọ nwere ike na-egwuri na Apple ngwaọrụ. Na na na ọzọ na-abụghị Apple ngwaọrụ, ị mkpa iji wepụ DRM nchebe. Ị nwere ike na-Video Converter Ultimate inyere gị aka.
Dị nnọọ mbubata iTunes video n'ime ngwa, wee họrọ ngwaọrụ gị (dị ka a Saumsung ekwentị) dị ka mmepụta usoro na presets, na mgbe ahụ tọghata ya. Mgbe ahụ converted video ga-egwuri na gị Saumsung ekwentị.
4. Ike mmekọrịta iTunes nkiri na iPhone, iPad, ma ọ bụ ndị ọzọ Apple ngwaọrụ.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike igwu gị video na iTunes, ọ pụtaghị na video nwere ike na-egwuri na gị iPhone ma ọ bụ iPad. Ị nwekwara mkpa tụlee ngwaọrụ gị na-akwado tech nkọwa.
Video Converter Ultimate Akwado tọghata iPhone, iPad na ndị ọzọ. Ị nwere ike iji presets iji tọghata videos gị na ngwaọrụ akwado.
5. Movies nwere ike keere QuickTime ma ike-atụkwasịkwara iTunes.
Dị nnọọ emechi gị QuickTime ọkpụkpọ, na mgbe ahụ ịdọrọ na dobe gị video ka iTunes ọzọ.
Ndị kasị mma M2TS Ntụgharị iji tọghata M2TS na ọkụ M2TS
Olee otú iji tọghata 2D ka 3D MKV na ala
> Resource> tọghata> Olee mbubata Videos Gị iTunes Library